A320 Mega ezinụlọ - A321 ụzọ adịghị emeghe?
A320 Mega ezinụlọ - A321 ụzọ adịghị emeghe? 2 afọ 1 ọnwa gara aga #1092
Ụgbọelu ọ bụla ọzọ dị mma na mkpọ ahụ ma e wezụga A321, naanị m nwere ike mepee ụzọ ọnụ ụzọ, ọ nwere nhazi maka nke a?
A320 Mega ezinụlọ - A321 ụzọ adịghị emeghe? 2 afọ 1 ọnwa gara aga #1094
Ndewo, Detuo ngalaba [EXITS] site na ndabara A321 ma dochie ngalaba ahụ na A321 na ngwugwu Mega! Ọ bụrụ na ịchọrọ usoro nzọụkwụ site na nzọụkwụ mee ka m mara. Iji mee ka ọ dị mfe, ebe a bụ ngalaba ahụ edepụtara n'okpuru .. mezie oyiri na mado
nọmba_of_exits = 3
ụzọ ọpụpụ.0 = 0.4, 45.50, -6.0, 7.0, 0 // openclose rate pasent kwa nke abụọ, longitudinal, n'akụkụ, vetikal ọnọdụ si datum (ụkwụ), ụdị (0 = Main 1 = Ibu 2 = Mgbapụta)
exit.1 = 0.4, -33.50, 5.85, 0.0, 1 // ọnụọgụ nke na-emeghepụ kwa ọnwa, ogologo oge, mpụta, ọnọdụ ihuenyo site na datum, ụdị (0 = Main 1 = Cargo 2 = Emergency)
ụzọ ọpụpụ.2 = 0.4, 29.90, 6.0, 1.0, 2 // ihe ngosipụta ọnụọgụ abụọ na sekọnd, ogologo, akụkụ, vetikal site na datum (ụkwụ), ụdị (0 = Isi 1 = Ibu 2 = Ọnọdụ mberede)
Oge ike page: 0.164 sekọnd